दूरदर्शिता, उदारता र कांग्रेस | चितवन पोष्ट दैनिक
दूरदर्शिता, उदारता र कांग्रेस
२०७० माघ २४, शुक्रबार ०४:२६ गते
महामहिम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सहमतीय राष्ट्रिय सरकार बनाउनका लागि सहमति गरेर आउन दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बन्न पुगेको नेपाली कांग्रेसलाई आह्वान् गरे । कांग्रेसले संसदीय दलका नेतामा सभापति सुशील कोइरालालाई निर्वाचित गरिसकेकाले उनकै नेतृत्वमा बन्ने सरकारका लागि राष्ट्रिय सहमतीय सरकार बनाउन प्रयत्न ग¥यो, तर यो सम्भव हुन सकेन । राप्रपा नेपालले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा कांग्रेसको सहमतीय राष्ट्रिय सरकार बनाउने चाहना अहिलेलाई अधुरो सपना नै बन्न पुग्यो ।
उदार र दूरदर्शी बन्न नसके बहुमतको सरकार निर्माण गर्ने प्रयत्न कांग्रेसका लागि फलामको चिउरा चपाउनुसरह नै हुने देखिन्छ । एउटा दह्रो सत्ता–सहयात्री बन्न सक्ने पार्टी नेकपा एमालेले सम्मानजनक सहभागिता नभए प्रतिपक्षमै रहने स्थायी कमिटीबाट निर्णय गरी आप्mनो पल्ला भारी तुल्याउने प्रयत्न गरेको छ । तेस्रो ठूलो दल एनेकपा माओवादीले भने प्रतिपक्षीकै रुपमा रहेर संविधान निर्माणका लागि भूमिका खेल्ने केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गरी सत्ता बार्गेनिङलाई निकै ओजनदार बनाएको छ । फोरम लोकतान्त्रिकका नेता विजयकुमार गच्छदारले सरकारमा जाने सङ्केत दिए पनि सत्ता र शक्तिकै लागि मरिहत्ते गर्ने अन्य मधेसवादी दलहरुले अहिलेलाई सरकारमा जान जनादेश नभएकाले प्रतिपक्षमै रहने सङ्केत गरी आप्mनो पल्ला भारी बनाउने प्रयत्न गरेका छन् ।
देशको वर्तमान आवश्यकता र जनताले चाहेजस्तो सहमतीय राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्न चाहेको भए पनि उसले सुरूबाटै पर्याप्त गृहकार्य नगर्दा राष्ट्रिय सरकार बन्न सकेन । यसर्थ, उसले बहुमतीय सरकार निर्माणकै लागि भए पनि प्रयत्न आरम्भ गरेको त छ, तर यही पनि अन्तरपार्टी छलफल र त्यसको निष्कर्ष नै ननिकाली अलिक आलोकाँचो पारामा नै अग्रसर भई वार्ता, संवाद र छलफल आरम्भ गरेकाले यसको टुङ्गो लाग्न निकै लामो समय लाग्न सक्ने देखिन्छ । यस्तो सत्ता साझेदारीको छलफल उपयुक्त नै भए पनि यसै विषयमा मात्र लामो समयसम्म छलफल गरिँदा यसैलाई सत्ताको लुछाचुँडी र कुर्सी मोहको पराकाष्ठा आदि अभियोग लाग्न सक्छ र कदाचित यसलाई अनर्गल मानिहाल्न पनि सकिन्न । कम्तीमा पनि यो पटक दलहरु यस अभियोगबाट बच्नैपर्छ ।
एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्ने घोषणा गरी निर्वाचनमा होमिएका ठूला दलहरु नै संविधानसभामा जाने कि नजाने ? समानुपातिक सभासद् छनोटमा राम्राभन्दा आप्mना मात्र कसरी छान्ने ? संविधानसभाको प्रथम बैठक कसले बोलाउने ? दलहरुका आ–आप्mना संसदीय दलको नेता को हुने ? सत्तामा जाने या नजाने ? सत्ता साझेदारी के कसरी गर्ने ? कसले कुन–कुन जिम्मेवारी लिने ? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने या नगर्ने ? जस्ता केही प्राविधिक तथा केही व्यक्तिगत एवम् पार्टीगत स्वार्थयुक्त बहसमा अल्झिँदा अहिले यो घोषणाको औचित्य नै धरापमा परेको छ । यो अलमल र अनावश्यक रुपमा गरिएको बहसकै कारण दुई महिना गुज्रिसकेको छ ।
कतिपय नेताहरु संविधानसभाको बैठक आरम्भ भएपछिको एक वर्ष भन्ने आफू अनुकूल परिभाषा गर्न पनि थालेका छन् । यस्तो प्रकृतिको परिभाषा वा खुलासा जनताको आँखामा धूलो झोँक्ने खालको देखिन्छ । मेरो गोरूको बाह्रै टक्का भन्दै आ–आप्mनो अडान पनि नछाड्ने र यसैलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर सरकारमा पनि नजाने र ठूलो दलले पनि अपेक्षित लचकता, उदारता र हार्दिकता पनि नदेखाउने हो भने सरकार बन्न नै ३ महिना लाग्न सक्छ । यसरी सरकार बन्न नै लामो समय लागेमा पुनः सरकार निर्माण भएपछिको एक वर्षमा संविधान जारी गर्ने भन्न खोजिएको हो भन्ने अथ्र्याएर विलम्ब गर्ने प्रयत्न हुन सक्छ ।
संविधान निर्माणको मूल राष्ट्रिय दायित्वबाट विमुख हुनेगरी सत्ताकै निम्ति महाभारत मच्चाउन खोज्नु किमार्थ क्षम्य हुन सक्तैन । सत्ता साझेदारी गर्ने दलहरुका बीच सम्मानजनक कार्यविभाजन हुनुलाई सत्ताका निम्ति लुछाचुँडी नै त भन्न नसकिएला, तर यसको पनि एउटा सीमा पक्कै हुन्छ नै । जनताले आगामी ५ वर्षका लागि जेठा दाइको भूमिका कांग्रेसलाई दिएका छन् ।
यसर्थ, उसले यो गरिमामय दायित्व निर्वाह गर्न र आउने सदियौँसम्मका लागि एउटा छुट्टै इतिहास निर्माण गर्नका लागि कांग्रेसले उदारता देखाउनै पर्छ । ज्यादा लोभी र स्वार्थी बन्न खोजे पक्कै अघिल्लो संविधानसभामा एनेकपा माओवादीले गरेको गल्ती पुनः दोहोरिने छ । पुनः सरकार पतन र पुनः सरकार गठन । अघिझैँ १७ पटकसम्म प्रधानमन्त्रीका लागि चुनाव, मात्र सत्ता संघर्ष । न संविधान निर्माण, न सङ्क्रमणको अन्त्य, न त देशको दिगो विकास; मात्र घात, सङ्घात र अन्तर्घात । युद्ध, महायुद्ध र गृहयुद्ध । यसबाट मुलुक रहला वा नरहला, कथञ्चित रहे पूर्ण औपनिवेश । चुनावी नौटङ्की धर्मशास्त्रले जन्म–मरण चक्रको व्याख्या गरझैँ पुनः अर्को शक्तिको उदय, पुनः निर्वाचन, पुनः उस्तै समस्या ।
फेरि कांग्रेसलाई सरकार फाप्दैन भन्नेहरु पनि छन् र यस्तै नजिर पनि छ तर यस्तो हुनुमा नफापेको होइन, बरू ढङ्ग नपुगेको एवम् केहीमा स्वार्थ र राजनीतिक नीचताले पराकाष्ठा छोएकाले मात्र यस्तो हुन पुगेको हो । निस्वार्थी सोच र देशको सेवा गर्ने प्रबल चाहना भए सबै समस्या बिस्तारै समाधान हुँदै जान सक्छन् ।
यसर्थ, कांग्रेसलाई सरकार फाप्दैन भन्नेहरुका लागि जवाफ दिने यो सुनौलो अवसर पनि हो । यसमा ऊ कत्तिको खरो उत्रन सक्छ, त्यो त सरकार बनाएपछि मात्रै भन्न सकिन्छ । अहिले नजरअन्दाज गरेर भनिहाल्नु हतारो हुन सक्छ । यो अनिष्टताको कालो घनघटा नेपाली आकाशमा मडारिन सक्ने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । यस्तो अनिष्टताको कालो बादल मडारिन नदिन पहिले नै सचेत हुनु अपरिहार्य छ । नेपाल रहेमात्र हामी नेपाली पनि रहिरहन सक्छौंँ । हाम्रो पुर्खाको विरासत पनि रहिरहने छ ।
यसको गरिमा र विरासतलाई जोगाउने कि मेटाउने ? यसको जिम्मा अहिले कांग्रेसको काँधमा आएको छ । अन्तर–बाह्य शक्तिका चुनौती अनन्त छन् । बहुमतीय सरकार नै बने पनि ‘शुभस्य शीघ्रम्’ भनेझैँ यसमा कत्ति ढिला नगरी र जुङे लडाइँ पनि नगरी दलहरुका बीच सामञ्जस्यता कायम गरी अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । रुपमा र सारमा पनि भन्दा यस्ता समस्याहरुलाई चिर्दै अघि बढ्न सक्नेले नै सुन्दर इतिहास बनाउन सक्छ । यस सत्यलाई हृदयङ्गम गर्दै घात र अन्तर्घात नगरी यो राष्ट्रिय समस्यालाई निराकरण गर्नु हरेकको नैतिक कर्तव्य हुन आउँछ ।
गत माघ १९ गते आइतबारका दिन प्रसारित साझा सवालमा प्रस्तुत सबै विषय सान्दर्भिक लाग्यो । खासगरी, वृजेश कुमार गुप्ताले नियत सफा भए जनभावनाअनुरुपको संविधान बन्न सक्छ भनी दिनुभएको अभिव्यक्ति वस्तुपरक लाग्यो । यस्तै, सबै तह र तप्काको खबरदारी आवश्यक रहेको भनी एमाले सभासद्ले व्यक्त गरेको विचार पनि बेलैमा संविधान निर्माणमा जनदबाब सिर्जना गर्नैपर्ने अवस्था रहेकाले मननीय छ । अब मनोनयन गरिने २६ सभासद्मध्ये कम्तीमा दुई जना अपाङ्गहरुमध्येबाट संविधानसभामा लगिनुपर्छ भन्ने मलाई पनि लागेको छ ।
अर्को कुरा, जनता सभासद्ले तलब, भत्ताको सुविधा नलिऊन् भन्ने पक्षमा पटक्कै छैनन्, बरू विगतमा झैँ रातो पासपोर्ट नबेचून्, दिउँसै मात्तिएर सडकमा उन्मत्त भैरवझैँ ताण्डव नृत्य नगरुन्, कर्मचारी पिट्तै नहिँडून्, खेताला खोजेर आफ्नो परीक्षा दिने व्यवस्था नगरुन्, नराम्रा कामलाई प्रोत्साहित नगरुन्, डन र गन नराखून्, मसाज केन्द्र, बार, क्यासिनो, भ्रष्टाचार र दुराचारजस्ता राष्ट्रघात हुने काम नगरी जनादेशअनुसारको काम इमानदारितापूर्वक समयमै फत्ते गरुन् भन्ने चाहन्छन् । सधैँ देश र जनताका हितमा काम गरी यो देशलाई समृद्ध बनाऊन् र आफू पनि समृद्ध देशको राजनेताका रुपमा विदेश भ्रमणमा पुग्दा त्यहाँ उच्च सम्मान पाएको हेर्न व्यग्र छन् । यसैले, माननीय सभासद्ज्यूहरुले अब विगतको संविधानमा जस्तो निरीह सभासद् हैन, आफू एउटा सबल र सक्षम जनप्रतिनिधिका रुपमा प्रस्तुत हुनु जरूरी रहेको ठान्दछु ।